कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै, पुन नियुक्ति हुन पर्छ सम्राट भट्टराई माग, सहमती हुनेले सक्दो सेयर गरौ ! – NepalajaMedia
कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै, पुन नियुक्ति हुन पर्छ सम्राट भट्टराई माग, सहमती हुनेले सक्दो सेयर गरौ !
August 16, 2020 239
नेपाल आमाको राष्टसेवक छोरा कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ र त गाउ शहर जिल्ला प्रदेश सबै उज्यालो छाएको छ , आउदो भदौमा उहाँको कार्य’काल सकिदैछ । त्येसैले सामाजिक सं’जालभरी पुन नि’युक्ति गर्नुपर्छ भनेर आम जनाताले माग उठाइरहेका छ्न ।
उठाउनु स्वाभा’विक नै पनि हो, किनकि आम जनतालाई कुलमान घिसिङ कोहो भनेर चिनाइ रहनु जरुरी छैन किन कि त्यो उहाँको कामले नि स्प’ष्ट पार्छ । यदि अझै पनि केही समय छ र सम्पुर्ण जनताले आ’वाज नउठाए फेरि उहाँको ठाउमा कुनै भ्रष्टा’चारी छिर्दैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले फेरि कुलमान नै हुनुपर्छ र उहाँको नियु’क्तिको लागि हामी सबै नेपालीले आ’वाज उठाउन ज’रुरी छ ।
सन् १९९४ मा इन्जि’नियरिङ् सकेपछि करिव ०५१ तिर उनी स्वदेश फर्केर नेपाल विद्यु’त प्राधि’करणमा सातौं त’हको इन्जि’नियर भए । प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै कुलमानले रसुवाको चि’लिमे जल विद्युत परि’योजनाको जिम्मे’वारी पाए । चिलिमे हा’इड्रो पावरको प्रबन्ध नि’र्देशक हुँदा चिलिमेकै
आम्दा’नीबाट तीन वटा अन्य आयो’जनाहरूको नि’र्माण सुरु गरेका थिए। ८ पछि कुलमान आयो’जनाबाट हटा’इएर प्राधि’करणको के’न्द्रमा आएपछि उनले करिब दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मे’वारी पाएनन् । प्राधि’करणको प्र’बन्ध निर्देशक सम्पादन ११औ तहका क’र्मचारी रहेका घिसिङ सन् २०१६ सेप्टे’म्बरमा नेपाल विद्यु’त प्राधि’करणको प्रबन्ध निर्देशक नि’युक्त भए।
घिसिङ नेपाल वि’द्युत प्राधी’करणको प्रवन्ध निर्देशक प’दमा सेप्टे’म्बरमा नि’युक्त भए भने नियुक्त भएको दो’स्रो महिना अर्थात् अ’क्टोबर-३० (२०७३ कात्तिक १४- लक्ष्मी पूजा) मा काठमाडौंबाट लोड’सेडिङ्ग मु’क्त गर्ने कार्य परी’क्षणको रुपमा शुरु गरे ।
सो परीक्षण सफल भएको अाधरमा २०७३ चैत्र १ देखि देश’व्यापी रुपमा लोड’सेडिङ्ग अ’न्त्य गर्न उनी सफल भए ।
कुलमान घिसिङ्को कार्यकाल अर्को महिना सकिँदै.
अब के देशलाई फेरि केहि अरा’जकता’वादी हरुले चं’ङ्गुलमा धकेल्ने भएत ?
Prevश्रीमती महि’नावारी हुँदा श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने
Nextमृ’तक नुवाकेटे युवाको श्रीमती मिडियामा, घ’टना अघि यस्तो भएको रहेछ (भिडियो)
ओलीकै समुहमा रहेका नेम्बाङले तोडे मौनता, ‘प्रधानमन्त्रीले मेरो सल्लाह मान्नुभएन, उहाँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन’
भोलि को दिन ग्रह अनुसार निकै राम्रो छ यि राशि हरुको,हजुर को कुन हेर्नुहोस भोलि को रशिफल चैत्र २७ शुक्रबार को राशिफल ।
सक्रिय हुन थाले राजस्व छली गर्नेहरू, एकै दिन ३६ करोड ८८ लाखको मुद्दा